Mila vonjy? Azafady mba mifandraisa anay ara-potoana mba hamaliana ireo fanontanianao！
F: Inona ny vidinao?
A: Ny vidinay dia azo ovaina arakaraka ny famatsiana sy ny anton-tsena hafa. Handefa anao ny lisitry ny vidiny nohavaozina aorian'ny hifandraisan'ny orinasanao anay raha mila fanazavana fanampiny.
F: Manana habetsahan'ny kaomandy farafahakeliny ve ianao?
A: Eny, mitaky ny baiko iraisam-pirenena rehetra izahay mba hanana habetsahan'ny lamina farany mitohy. Raha mitady hamidy indray ianao nefa amin'ny habetsaky ny kely dia kely, mamporisika anao izahay hijery ny tranokalanay.
F: Azonao atao ve ny manome ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany?
A: Eny, afaka manome antontan-taratasy betsaka indrindra izahay, anisan'izany ny Certificat de analysis / Conformance; Insurance; Fiandohana, ary antontan-taratasy fanondranana hafa raha ilaina izany.
F: Inona ny salan'isan'ny fotoana fitarihana?
A: Ho an'ny santionany, ny fotoana itarihana dia manodidina ny 7 andro. Ho an'ny famokarana betsaka, ny mitarika fotoana dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Ny fotoana itarihana dia nanjary nahomby rehefa (1) nahazo ny petra-bolanao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay, azafady mba andefaso ny takiana amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
F: Inona avy ireo karazana fomba fandoavam-bola ekenao?
A: Azonao atao ny mandoa ny fandoavam-bola amin'ny kaonty banky anay, Western Union na PayPal: fametrahana 30% mialoha, fifandanjana 70% amin'ny kopian'ny B / L.
F: Inona ny fiantohana vokatra?
A: Manome antoka ny fitaovanay sy ny fomba fanaovanay izahay. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny vokatra. Amin'ny fiantohana na tsia, kolontsain'ny orinasanay ny miresaka sy hamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra hahitan'ny tsirairay fahafaham-po.
F: Ianao ve manome toky fa azo antoka sy azo antoka ny fanaterana ny vokatra?
A: Eny, mampiasa fonosana fanondranana avo lenta foana izahay. Ampiasainay ihany koa ny famonosana loza manokana ho an'ny entana mampidi-doza ary ny mpandefa fitehirizana mangatsiaka voamarina ho an'ny entana mora tohina. Ny fonosana matihanina sy ny takiana famonosana tsy mahazatra dia mety mitaky fiampangana fanampiny.
F: Ahoana ny vidin'ny fandefasana?
A: Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ny entana. Ny Express matetika no fomba haingana indrindra nefa koa lafo indrindra. Amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be. Ny tahan'ny fandefasana entana marina dia tsy afaka omenay anao raha toa ka fantatray ny antsipirian'ny habe, ny lanja ary ny fomba. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.